Digital Agency Internships XCHARX Fall 2017 XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » ဂျော့ဘ် » ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ Internship - 2017 Fall
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ Internship - 2017 Fall
ရာထူး: ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ Internship - 2017 Fall
မာအလုပ်လုပ်အတွက်သက်တောင်သင်ယူနှင့်ဖန်တီးမှုနှင့်မဟာဗျူဟာရလဒ်များကို badass အထောက်အကူပြုဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား? Sparxoo ရဲ့ paid အလုပ်သင်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, High-လောင်းကြေးကမ်ဘာပျေါတှငျဗတ္တိဇံကိုခံရလိမ့်မည်။ သငျသညျပဲ့ထိန်းခြင်းနှင့်အကြောင်းကြားသော်လည်း, သင်သည် babied မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်ဖို့, သငျသညျ, မြဲစိတ်ပိုင်းခေတ်ရဲ့သွက်လက်, ဖန်တီးမှုများနှင့်ထူးချွန်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ရမည်။ သငျသညျစုံလင်သောမထိုက်မတန်နေထင်ကြသလော ကျနော်တို့ကအောက်ပါအဖွဲ့များများအတွက်နိုင်ငံတကာအတွက်ရှာနေတာ:
ဝက်ဘ် & Mobile ကဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
Intern များ3လနိမ့်ဆုံးအဘို့အမရရှိနိုင်ပါရှိရပါမည်။ ရရှိနိုင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်အချိန်ဇယား။
DESIGN Internship Response
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်း: badass, အဆင်းလှ, အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖန်တီးပါ။ အရှိန်မြှင့်ပြီးသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်စီမံကိန်းများပြီးစီးအတွက်အကြီးတန်းပေးအပ်သော Designer Assist နှင့်ဝက်ဘ်, မိုဘိုင်းနှင့်လူမှုရေးစီမံကိန်းများအတွက်ဂရပ်ဖစ် element တွေကိုဖန်တီးပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ Excellence: ခိုင်ခံ့အုတ်မြစ်နှင့်နည်းပညာ, ဖန်တီးမှုထူးချွန်၏မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းကိုတည်ဆောက်စေ။ အမှတ်တံဆိပ်-တသမတ်တည်းအသုံးပြုသူ-ဗဟိုပြုပုံစံဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ကြောင်း badass အေဂျင်စီဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ Assist ။ versioning မှသန့်ရှင်းတဲ့အပြင်အဆင်ကနေဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်လျှောက်လုံးအကောင်းဆုံးအဘို့ကြိုးစားကြသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ: အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာမယ့်နှင့်အမြန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံမှပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Excel ကို။ သင်, တန်ခိုးအာနုဘော်လာအောင်နှိုးဆွညဏ်မှ add နှင့်အတွေးအခေါ်များအပေါ်တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပွားစွမ်းရည်ဆက်စပ်နိုင်စွမ်းကိုထိရောက်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်မှဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။
client အာရုံစိုက်: client များ Sparxoo ထံမှနောက်ထပ်အကူအညီကိုရှာနှင့် / သို့မဟုတ် Sparxoo မှအခြားသူများအားရည်ညွှန်းထိုကဲ့သို့သောကြောင်း, အချိန်, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ကိုအပ်ခြွင်းချက်အလုပ်မှတဆင့် client ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမောင်း။
မဟာဗျူဟာသက်ရောက်မှု: စဉ်ဆက်မပြတ်, တိုင်းတာရလဒ်များကိုလိုက်လျောဖို့ (အမိန့်ယူပြီးဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) ဆုံးဖြတ်ချက်များမောင်းထုတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရင်ဆိုင်ရကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Sparxoo အဖွဲ့အကူအညီပေးသညျ။
Internship Response အကောင့်
အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ကျော်လွန်အထက်တွင်-and ရလဒ်များသူတို့ရဲ့လိုက်စားအတွက်အကောင့်မန်နေဂျာ Assist ။ အခြားသူတွေလာအောင်နှိုးဆွဖို့ client ကိုအလုပ်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုရူပါရုံကိုဆကျသှယျနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မြင့်မား-performing အသင်းဦးဆောင်လမ်းပြရန်ကိုကူညီပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အာရုံစိုက်: ဘက်ပေါင်းစုံဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်စျေးကွက်၏အားလုံးပါဝင်နိုင်အတွေ့အကြုံများ, ရှာဖွေစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ရပ်ရွာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝက်ဘ် & မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံများအားထောက်ကူပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်နှင့်အတူကျွမ်းဆည်းပူး။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ: အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာမယ့်နှင့်အမြန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံမှပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Excel ကို။ တန်ခိုးအာနုဘော်လာအောင်နှိုးဆွ, ညဏ်မှ add နှင့်အတွေးအခေါ်များအပေါ်တည်ဆောက်။ အခြားသူများပြန်ပြောပြဖို့စွမ်းရည်ကိုထိရောက်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်မှဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသနှင့်ယုံကြည်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ပူးပေါင်းပိုပြီးပျော်စရာပါစေ။
client အာရုံစိုက်: တစ်ဦး Point-of-အဆက်အသွယ် client ကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တင်ပြချက်များအပါအဝင် client များအတွက်အဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ client များ Sparxoo ထံမှနောက်ထပ်အကူအညီကိုရှာနှင့် / သို့မဟုတ် Sparxoo မှအခြားသူများအားရည်ညွှန်းထိုကဲ့သို့သောကြောင်း, အချိန်, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ကိုအပ်ခြွင်းချက်အလုပ်မှတဆင့် client ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမောင်း။
မဟာဗျူဟာသက်ရောက်မှု: စဉ်ဆက်မပြတ်, တိုင်းတာရလဒ်များကိုလိုက်လျောဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်များမောင်းထုတ်ရန်သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပို့ချခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရင်ဆိုင်ရကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Sparxoo အဖွဲ့အကူအညီပေးသညျ။
အကြောင်းအရာ Internship Response
အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ & စီမံခန့်ခွဲမှု: ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးရေတိုပုံစံအကြောင်းအရာ (က်ဘ်ဆိုက်မိတ္တူ, ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ, လူမှုရေးမီဒီယာ updates များကို) နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပုံစံအကြောင်းအရာ (အဖြူစာတမ်းများ, ဆောင်းပါးများ, ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်, ဗီဒီယို script များ) ဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်ခြွင်းချက်အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ ။ တစ်ခုဖွဲ့စည်း, ပြည်တွင်းရေးပုံပြင်-based အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြက္ခဒိန်နှင့်အစီရင်ခံမှုစနစ်အထဲကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ Assist ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြက္ခဒိန်နဲ့ upload မိတ္တူ, ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းအတွက်လူမှုရေးအကောင့်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကိုဖြတ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာ post ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဇာတ်လမ်းတွေ: သတိထားမိလာတယ်ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာ curate ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဒီဇိုင်းအသင်းများနှင့်အတူပူးပေါင်း။ တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွေအတိုင်းဤအခန်းကဏ္ဍများတွင်သင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းမည် မာလ်တီမီဒီယာ ဓာတ်ပုံ, ဂရပ်ဖစ်နဲ့ဗီဒီယို၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်သင်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ် PR စနစ်: အယ်ဒီတာအဖွဲ့, ထုတ်ကုန်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင်များမီးမောင်းထိုးပြဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့် PR စနစ်အားထုတ်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ရန်ကိုကူညီပါ။ စာနယ်ဇင်း, ဘလော့ဂါအဝေးရောက်နှင့်မဟာဗျူဟာမဟာမိတ်ဖွဲ့မှတဆင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နေရာချထားရဖို့ရန်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပဏာမခြေလှမ်းများနှင့်အတူ Assist ။ ရှာဖွေရေးဆီလျှော်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကရဲ့ SEO ဆိုသည်မှာ / SEM အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပူးပေါင်း; keyword ကိုသုတေသနပြုကူညီဖို့နဲ့ content ပိုကောင်းအောင်။
ဒေတာများ & Insights: အကူအညီမော်နီတာ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဖောက်သည်, အကြောင်းအရာနှင့်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များနှင့်အဝေးရောက်အခွင့်အလမ်းများကိုအကြံပြုဖို့ယှဉ်ပြိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်သတင်းပို့ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ: ကျနော်တို့အချိန်မီထုံးစံ၌အပိုင်းပိုင်းဖြည့်စွက်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေသူတို့၏ခြေထောက်ပေါ်အလျင်အမြန်ထင်, စားပွဲအသစ်အတွေးအခေါ်များဆောင်တတ်၏, တစ်ဦးပူးပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်မီနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာဖွေနေပါတယ်။
DIGITAL Market Internship Response
ဇာတ်လမ်းတွေ & အကြောင်းအရာ: စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အကြောင်းအရာနှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပုံပြင်များကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ content ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်မှအမှတ်တံဆိပ်ဆောင်ကြဉ်းရန်။ နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလူမှုရေးပို့စ်, ဘလော့ဂ်များ, အီးမေးလ်, ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, နှင့်အခြားအကြောင်းအရာအရေးအသားမှတဆင့်အကြောင်းအရာအားထုတ်မှုအားထောက်ကူပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ် PR စနစ်: အယ်ဒီတာအဖွဲ့, ထုတ်ကုန်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင်များမီးမောင်းထိုးပြဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့် PR စနစ်အားထုတ်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဆန်းစစ်ပါ။ စာနယ်ဇင်း, ဘလော့ဂါအဝေးရောက်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှတဆင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နေရာချထားရဖို့ရန်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပဏာမခြေလှမ်းများအားထောက်ကူပါ။ ကျနော်တို့ကောင်းသောကွန်ရက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စကားများနှင့်အင်တာဗျူးအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက် key ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကာယကံရှင်များနှင့်အတူညှိနှိုင်းဖို့ယုံကြည်မှုအဘို့ရှာကြ၏။
လူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု: အဆင့်မြင့်စီမံကိန်းနှင့်နေ့ရက်ကို-to-နေ့, Real-time စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းမှတဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် / လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအားထောက်ကူပါ။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ကြောင်းစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာနှင့် Real-time ပြောဆိုမှုများမှတဆင့်မျိုးစုံလူမှုမီဒီယာ clients များ & လိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးနေ့စဉ်ပစ်မှတ်ပရိသတ်တွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် PR စနစ်မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေလူမှုရေးကြော်ငြာမှဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲမှ span မှထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။
ဒေတာများ & Insights: စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အဖွဲ့ကညဏ်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှာဖွေရေးမှတဆင့် client ကိုအမှတ်တံဆိပ်အတွက်စီမံကိန်းများ, နှင့်စျေးကွက်အားထောက်ကူပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ဖောက်သည် & ယှဉ်ပြိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့လူမှုရေးမီဒီယာလမ်းကြောင်းများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အကောင်းဆုံး-In-class ကိုကို web sites များ & ဘလော့ဂ်များ, ထွန်းသစ်စခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ထောငျ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏သုတေသန။ client ကိုအဖွဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုတင်ပြ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ: အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာမယ့်နှင့်အမြန်-တှေးအချေါနှငျ့ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံမှပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Excel ကို။ ဒီအနေအထား, တန်ခိုးအာနုဘော်လာအောင်နှိုးဆွညဏ်မှ add, အတွေးအခေါ်များအပေါ်တည်ဆောက်ရန်နှင့်လျှင်မြန်စွာစမ်းသပ်ရန်-and သင်ယူလျင်မြန်စွာမှ prototype ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပွားစွမ်းရည်ဆက်စပ်နိုင်စွမ်းကိုထိရောက်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်မှဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ဟာသတစ်ခုသဘောမျိုးပူးပေါင်းပိုပြီးပျော်စရာအောင်ကူညီပေးသည်။
Web & mobile development Internship Response
interactive ဒီဇိုင်း: အဆင်အပြင်ကျန်တာတွေ, လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျန်တာတွေနှင့်မိုဘိုင်း-တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအပါအဝင် Multi-screen ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်အချိန်ပေါ်စီမံကိန်းများပြီးစီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ Assist ။ တစ်ဦးချင်းစီသည်စီမံကိန်းနှင့်အတူက HTML, CSS ကို, PHP နဲ့ jQuery ၏အသိပညာကြီးထွားဖို့ Continue ။
ဝက်ဘ် & Mobile ကဒီဇိုင်း: အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို (UI ကို / UX) ၏ညဏ်နဲ့ web နှင့်မိုဘိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြေရှင်းနည်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ စိန်ခေါ်မှုများဖို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ client များ wow ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာပါ။ ခက်, စမတ်မရအလုပ်လုပ်ကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ Excellence: ခိုင်ခံ့အုတ်မြစ်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်၏မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းကိုတည်ဆောက်စေ။ တစ်ဦးချင်းစီကို client စီမံကိန်းကိုတဆင့် HTML ကို, CSS ကို, PHP နဲ့ jQuery ၏အသိပညာတိုးတက်စေပါ။ မှတ်ချက်: လိုအပ်သောမတိုင်မီက WordPress ကိုအတှေ့အကွုံ။
Rising ကောလိပ်အငယ်တန်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး 3.5 တစ် GPA နှင့်အတူအကြီးတန်း
Mac OS X မှာ Gmail, Google Docs တွင်တတ်ကျွမ်း
ပိုမိုနှစ်သက် WordPress ကိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကျွမ်းတဝင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်၏ track record
, မှုတ်သွင်း, လုံ့လရှိသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အဆုံးအဖြတ်, ယုံကြည်မှုနှင့်အလွန်အမင်းအာရုံစိုက်
Sparxoo ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်တံဆိပ်အတွက်အထူးပြုတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ပြောင်းလဲနေသောပျော်စရာ, ထောက်ခံ, စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်, အရင်းအမြစ်များ, နဲ့ Hard အလုပ်လုပ်သောပါရမီ, မောင်းနှင်အသင်းရှိသည်။ အတိတ်ကာလတှငျကြှနျုပျတို့အသေးစားတစ်နှစ်တာ၏စီးပွားရေးနှင့် Tampa ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းအလုပ်လုပ်မှအကောင်းဆုံးနေရာများများအတွက်ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ Sparxoo တစ်ဦးမာနထောင်လွှားတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်သည်နှင့်ငါတို့သည်မြို့ကျော်သင်တို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကိုဝါကွှားဂုဏ်ယူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့် ...
entry အဆင့်ကို Creative Designer မှ - ဇူလိုင်လ 15, 2018
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level) - ဇူလိုင်လ 15, 2018
ကင်မရာအော်ပရေတာ - ဇူလိုင်လ 15, 2018
CES2017 ပေါင်းစည်းမှု	2017-07-16
ယခင်: ပြည်တွင်းစစ်ကြီးလှုပ်ရှားမှု ... VR စစ်ပွဲမှသွား - ထိုကတုတ်ကျင်းထဲကနေတစ်ဦးကပေးစာ
နောက်တစ်ခု: Canon ၏ Burbank Reality ဖြစ်လာ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ Internship - 2017 Fall" ။ http://www.broadcastbeat.com/digital-agency-internships-fall-2017-2/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။